७० करोडको आईपीओ खुल्दै, कति कित्ताका लागि आवेदन दिने ? -3ghumti
७० करोडको आईपीओ खुल्दै, कति कित्ताका...
शेयर बजार :
७० करोडको आईपीओ खुल्दै, कति कित्ताका लागि आवेदन दिने ?
भाद्र २९, २०७८ मंगलवार १३:२७ बजे
काठमाडौँ l साहस ऊर्जाले आगामी ६ असोजदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले ६ असोजदेखि सर्वसाधारणका लागि ७० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।
एक सय चार अंकले बढ्यो नेप्से, सबै सुचक हरियो
ढुंगाना बिरुद्ध लागेको आरोपमा जाँचबुझ समितीले बुझायो प्रतिवेदन